▷ 🎮 Imicu Eyinkulungwane 【Buyekeza Futhi Ulande ✅】 - 【Ukuqhathanisa】 2022
🎮 Uchungechunge oluyinkulungwane 【Buyekeza futhi ulande ✅】
I-Thousand Threads igeyimu yokutholwa egcina iziba ukusethwa kwayo okuthakazelisayo ngokukuyekisa ukumba ujule kakhulu.
I-Thousand Threads ivula ngaphandle kwetende endaweni engaziwa, umgwaqo owubhuqu obonisa indlela engase ilandelwe. Uma usuka kude naye, kungenzeka kakhulu ukuthi impisi izoqaphela futhi ihlasele; Angase ambuyisele emuva ngenduku, amdlule, noma amfake endlini ngephutha abuke ethukile njengoba ethethisa abahlali ababili abakhiqizwe ngokungahleliwe ababehleli ngokuthula isikhashana ngaphambili, bebhekene nezindaba zabo. . Ungathola abantu abaningi futhi uqale ukubenzela imisebenzi eyinqaba; Ungaphinde ubuyele emgwaqeni ufice isidumbu seposi endaweni sisaphethe isikhwama sezinhlamvu ezingakafiki.
Lokho ukusethwa okumangalisayo kweMiluko Eyinkulungwane, igeyimu yokuhlola umuntu wokuqala okuthi, amahora ambalwa, igcine ezinye zezithembiso ezenziwa kuleyo mizuzu embalwa yokuqala. Akukho engakuthola emdlalweni ngemuva kwalokho uma kuqhathaniswa nesasasa enganginalo emizuzwini embalwa yokuqala ngaze ngathola iposi selishonile. Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi igeyimu ayithandeki ezindaweni - lo mhlaba omkhulu ovulekile unezindaba okufanele uzixoxele namasayithi okufanele abonwe, nakuba zivela ngesivinini esiphansi kakhulu.
Amadodana ayinkulungwane aqala emagqumeni, indawo enkulu eluhlaza enabantu abaningi bendawo abangahlangana nayo, isitolo esizovakashelwa, izimbali nezitshalo okufanele uzibheke, izimpisi okufanele zigwenywe, kanye neposi okufanele lithunyelwe. Kunezinye izindawo ezinhlanu ozowela kuzo ekugcineni, kodwa umgomo wakho uhlala unjalo kuyo yonke indawo: ukuhlangana nawo wonke umuntu futhi ubambe iqhaza ezimpilweni zabo. Isakhamuzi ngasinye sikhiqizwa ngokungahleliwe uma igeyimu ivulwa, okusho ukuthi umdlali ngamunye uzohlangana nabantu abahlukile, nakuba kungenakho okuningi okubahlukanisa ngokobuntu. Abanye bazokunikeza imisebenzi ongayenza ukuze uthole imali, njengokuthola into komunye umlingiswa, ukuthola othile futhi umuphe isipho, noma ukukhipha esinye sezitha zakhe. Imali ibalulekile ekuqhubekeni kwakho phambili, nakuba kungadingeki ukuba wenze umsebenzi omningi ukuze uvule imephu yonke futhi ulethe yonke imeyili yakho.
Ngesikhathi ngisuka ku-Thousand Threads, izicelo eziningi engazithola kwakuwukuthi ngikhiphe abanye abalingiswa ngabasebenzi bami noma ngendwayimane, mhlawumbe ngenxa yokuthi, ngaleso sikhathi, ngangenze izenzo eziningi zobudlova futhi ngavusa inzondo ethile. kuwo wonke umhlaba wegeyimu. Kwangithatha isikhathi ukuqaphela ukuthi wawungasekho umgomo obalulekile kulo mdlalo; ungaletha yonke imeyili, ungaphendula izicelo eziningi ngendlela othanda ngayo, futhi ungahlola yonke imephu, kodwa ayikho indaba evamile ongayithola.
Iqiniso lokuthi ayikho incazelo enkulu ngale kokuthi ungaba mnandi kangakanani ekubeni yingxenye yaleli zwe aliyona inkinga ekuqaleni, njengoba uzwa sengathi usuzokhubeka kokuthile okuthakazelisayo. Kodwa lapho ngivula indawo yokugcina, ngemva kwamahora amane, kwacaca ukuthi kwakungenjalo, futhi ngase ngivele ngizamile ukugwema isithukuthezi ngehora lokugcina. Wehla Ngemicu Eyinkulungwane, futhi ukuzulazula endaweni entsha kungaba mnandi ngendlela efanayo ozizwa umnandi ngayo ukuhamba ngomgwaqo ongakaze uwuhambe ngaphambili. Kodwa lokho kusho ukuthi ukusuka esifundeni uye kwesinye ukuletha imeyili noma ukukhipha imephu yakho ukuze wenze isiqiniseko sokuthi uthole wonke ama-quadrants acishe afane endawo osola ukuthi umhlali omfunayo uhlala eyisicefe. Ungabuza abantu obaziyo ukuthi bayazi yini ukuthi ungamtholaphi umuntu omfunayo, kodwa kuwumdwebo ophelele uma benenkomba noma cha, futhi azikho izinkomba okufanele zilandelwe - bayayazi nemephu yakho. isesikhathini, noma abakwenzi futhi akunjalo.
Imicu Eyinkulungwane ingadlalwa ngaphandle kokungqubuzana okuningi. Gwema izimpisi namabhere angakubulala, yenqaba izicelo zokumangaza abantu, gwema izimpi eziqubuka kwesinye isikhathi phakathi kwezakhamizi, futhi ungaphila impilo yomsizi onobungane. Kodwa ungaphinde uhambe ngenye indlela. I-inventory yakho encane iqukethe kokubili izikhali ezibulalayo nezingabulali - ipiki oyidingayo ukuze uchoboze amatshe (okungaveza izinsiza eziwusizo) ingase isetshenziselwe ukushaya abantu baze bafe. Iqiniso lithi abanye abantu basesigodini sami ngababulala hhayi ngoba bebafanele, kodwa ngenxa yokudinwa ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzekani. Hhayi kakhulu ekupheleni kosuku. Sebehambile, kodwa kusenenqwaba yabanye abalingiswa ongakhuluma nabo, abaningi babo abazoba nengxoxo efanayo.
Iningi labantu ohlangana nabo ku-Thousand Threads abanabo ubuntu obuningi, ngaphandle kokuthi uvule futhi ufunde imeyili yabo (futhi kufanele, ngoba asikho nhlobo isijeziso sokwenza kanjalo). I-imeyili iqukethe imicu yezindaba ethokozisayo kanye nedrama yomuntu siqu, ngeshwa engabonakali nhlobo emisebenzini abalingiswa abakucela ukuba uyenze. Iqiniso lokuthi abalingisi bakhiqizwa ngokungahleliwe kunokuba badalwe ekugcineni liyingozi kugeyimu, njengoba uzobona inkhulumomphendvulwano efanayo iphuma emilonyeni eminingi.
Kuyihlazo, ngoba kukhona inhlansi yento enkulu lapha. Incwadi engayilethayo yayibhalelwe ofileyo; Ngafunda ukuthi wayesefile ngaphambi kokuba ngithole ikhaya lakhe (ungabuza abantu obaziyo ukuthi bayazi yini lapho othile oye wezwa kuphela ngokuphila kwakhe), futhi lapho ngithola isidumbu sakhe, ngakwazi ukubuyisa nokuletha izincwadi ezimbalwa ezazihleliwe. ngendodana yakho. Kodwa-ke, lokho akuzange kuvule noma yikuphi ukusebenzelana okuyingqayizivele - inhlekelele eyenzeka ngokuvamile ayikhulunywa ngaphandle kwemeyili. Njengoba ngihambise iposi ebhokisini leposi lendodana, angikwazi ukusho ngokuqinisekile ukuthi ubengasho okuthile okunamandla ngoyise, kodwa akukho imeyili engayiletha ngokuqondile eyaholela ekwambulweni okuthakazelisayo. Amagama ezinhlamvu akhuluma ngezithandwa ezidelelekile, imindeni ekude, nobudlelwano obusafufusa, kodwa lezi zici ziboniswa kuphela emazwini womculo, hhayi enkulumweni yomdlalo.
Kukhona inethiwekhi yokuxhumana phakathi kwezinhlamvu, futhi lokho kungashintsha njengoba udlala ngohlelo "amahemuhemu". Kuyajabulisa ukubona ukuthi izenzo zakho zikubonisa kanjani emahoreni kamuva; Njengoba ngangihamba kancane ngibuyela kumephu, ngifuna izinto engizozenza, ngahlangana nabalingiswa bengibonga, bengithethisa, noma bengihlasela ngenxa yezinto engangizenze amahora amaningi ngaphambili. Kuyajabulisa ukubona umthelela we-domino wezenzo zakho, kodwa kunomuzwa omncane kakhulu wokuthi zinomthelela obambekayo kulaba balingisi, njengoba bedwetshiwe kakhulu. Akunakwenzeka ukuthi ulandelele lokho okwenzile kubalingiswa ukuze ubenze bakuzonde; Kunomlingisi oyedwa engahlangana naye engingamchaza ngokuthi “oyesabekayo” (wangicela ukuba ngintshontshe amazinyo engane yomunye umlingiswa), kodwa uma kungenjalo kuzoba nzima kimina ukusho izichasiso kwezinye izakhamuzi eziyishumi nambili engahlangana nazo.
Njengoba uhlola, ungase futhi uthole ama-artifact namanxiwa akhomba kokuthile okungaphansi komhlaba, okulinde ukutholwa. Kodwa akukho nje okuningi lapho. Ukunikeza izinto zobuciko ku-NPC ethile kuveza inqwaba yezindaba ezithokozisayo, kodwa uma kunencazelo ejulile ngemuva kwakho konke lokhu, noma imfihlo enkulu ongayithola, ifihleke kahle kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, kuye kwaba sobala ukuthi usongo nemfihlakalo umdlalo oyithembisayo ngalezi zakhiwo, ngezidumbu zabo nemibiko yokuhlaselwa okungahleliwe, ayinakho ngemuva kwayo.
Nokho, phakathi kwakho konke lokhu, kunezikhathi zomusa nobuhle. Kuhle ukungena endaweni entsha futhi ubuke isikimu sombala wendawo okuzungezile sishintsha kancane, njengoba izithombe ezibukwayo ezilula kodwa ezihlabayo zegeyimu zinikeza ukubukwa okuhle. Amasistimu esiphithiphithi adlalwayo emdlalweni kwesinye isikhathi angaholela ezikhathini ezimangalisayo, njengokubuka amabhere amabili ehamba endaweni yokuhweba ngaphambi kokuba abhekane, noma asondele kumlingiswa omusha ukuze alibambe. Ukuhlasela ngoba eyisihlobo somuntu omthandayo. shaya. ngaphandle ngaphambili. Uhlelo lobuciko obungajwayelekile (okukuvumela ukuthi uthuthukise impilo yakho nezinto ngezitshalo nezinto oziqoqayo) likunikeza umuzwa ozuzisayo lapho ekugcineni uhlome ngesihlilingi kanye ne-pickaxe engaxosha ukuhlasela ngokushesha. Ngesikhathi ngisuka emdlalweni, ngase nginombono okungenani wokuqhubeka komuntu siqu enanini lensimbi engangiyibambe (eyayingenza izinhlamvu zesibhamu engangisiphethe). Ngangikhethe ukungathengi, ngoba isihlilingi sami sase sinamandla.)
Izinkulungwane zemiluko ayikwazi ukuletha izithembiso zayo zasekuqaleni zokuceba kwedolobhana elincane kanye nobubi obufihlekile - njengoba uthola imephu futhi uhlangana nabantu abaningi kakhulu abahlala lapho, umhlaba wegeyimu uzizwa ungaphansi njengendawo yangempela. Ngenkathi ngijabulele isimo segeyimu kanye nomuzwa wayo wokutholwa ekuqaleni, ekugcineni, ngase ngilahlekelwe intshisekelo ezingxoxweni zabantu bomdlalo, akekho noyedwa kubo owazizwa engabantu bangempela. Izindawo ezixakile zeMiluko Eyinkulungwane zimnandi uma udlula, kepha uma uhlala isikhathi esingaphezu kwehora noma amabili, uzobona ukuthi akukho okuningi okumele ukwenze lapho.
Ungalanda kanjani imicu eyinkulungwane
Ividiyo ye-Amazon Prime (Ividiyo efunwayo); Don Cheadle, Ewan McGregor, Michael Stuhlbarg (Abalingisi)